Saturday , March 8 2014
JAJJABOO SABAA Joollee qacalee lammiin oomishatte Jajjaboo sabaa tan eebbaan guddatte Humna haarawaa... Galmee Seenaa Irraa: Moggaasa maqoota gandoota fii magaaloota Oromiyaa Isa ganama…
Amaarsan dhala Oromoo qofaami kan inni amaareessuu yaale, lafaa, laga, gaarreen fii qabeenya Oromoo ... Current
JAJJABOO SABAA Joollee qacalee lammiin oomishatte Jajjaboo sabaa tan eebbaan guddatte Humna haarawaan garayyuu onnattee Durat deemaa jirti gurmuun wal jaartee. Dhaloonni qubee tan sodaa hin qabne Fuul dura malee ... Read More »
OMN Bitootessa 7 – Xiinxala du’a Obbo Alamaayyoo Atoomsaa Subscribe to our Channel VIVA…. Obboo Mohamed Adeemoo fii Johar Mohamed..Oromoon isiniin boona Oromo refugee’s performing at the Nairobi University on Refugee Day 20th June.. Oromo refugee's performing at the Nairobi University on Refugee Day 20th June..
Qeerroo: Yaadi kun gaarii ta'us. Ammoo mirqaana irraa waan jedhame na... tamsaasa OMNtif: OMN 'n banamuu isaatiif gammachuun keenya jechaan kan ibsamu... gumabaas: Yaada gaarii qabdda. Hawwiin kee illee guddaadha. Garuu har'... Proud Oromo: Ofcourse federalism is the wrong answer to colonialism. But... ali: Yaadannoo bara tokkoffaa du'a Sooreysa Jeeneraal Jaarraa Abb... Abo
afaan oromoo An Open Letter to Obbo Leenco Lata